Ọtụtụ ndị na-eche na okpukpe Ndịàmà Jehova bụ okpukpe ọhụrụ. Ma, kemgbe ihe karịrị puku afọ abụọ na narị asaa gara aga, Chineke kpọrọ ndị na-efe ya “ndị àmà” ya. (Aịzaya 43:10-12) Tupu afọ 1931, ihe a na-akpọ anyị bụ Ndị Mmụta Baịbụl. Gịnịzi mere anyị ji malite ịza Ndịàmà Jehova?
E ji ya ama ọrụ anyị na-arụ. Ọtụtụ ndị fere Chineke n’oge ochie gbaara ndị ọzọ àmà gbasara okwukwe ha nwere n’ebe Jehova nọ. Onye mbụ n’ime ha bụ Ebel, onye ezi omume. Ka oge na-aga, Noa, Ebreham, Sera, Mozis, Devid na ndị ọzọ bịara soro ná ndị Baịbụl kpọrọ “oké ìgwè ndị àmà.” (Ndị Hibru 11:4–12:1) Anyị kpebisiri ike na anyị ga na-eme ka ndị mmadụ mara nke bụ́ eziokwu gbasara Chineke anyị otú ahụ mmadụ nwere ike kpebie na ya ga-aga n’ụlọikpe gbaara onye aka ya dị ọcha akaebe.
mailto:?body=Gịnị Mere Anyị Ji Na-aza Ndịàmà Jehova?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012143%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Mere Anyị Ji Na-aza Ndịàmà Jehova?